Higadona anio eny Ivato : hampita hafatra ho an’ny vahoaka malagasy ny papa François | NewsMada
Higadona anio eny Ivato : hampita hafatra ho an’ny vahoaka malagasy ny papa François
Par Taratra sur 06/09/2019
Ny Papa François indray, taorian’ny Barea. Higadona, anio amin’ny 4 ora sy sasany tolakandro eny Ivato, ny papa François. Filoham-panjakan’i Vatikana nefa koa filohan’ny Eglizy katolika romana izy. Ela niandrasana izao ny Malagasy ary efa somebiseby ihany… Anaty fandaharam-potoany ny hafatra ho an’ny rehetra.
Tsy misy afa-tsy resaka papa François. Efa mipetraka avokoa ny lamina rehetra amin’izao fahatongavany izao. Mazava ny toromarika nomen’ny mpitandro filaminana sy ny fiangonana ny amin’ny tokony hanarahan’ny rehetra ny fandaminana sy ny fandrindrana amin’izao handraisana azy izao. “Hentitra ny lamina rehetra sy ny paikady. Tomombana izany ka ifaliantsika anaty fitoniana”, hoy ny hafatry ny komity mpandrindra, i Yvette Sylla.
Ho an’ny fandaharam-potoana, hihazo avy hatrany ny eny amin’ny Noncuature Ivandry ny papa François aorian’ny fahatongavany, eny Ivato. Horaisin’ny filoha Rajoelina mivady eny Iavoloha ny tenany, ny asabotsy maraina amin’ny 9 ora. Hitohy amin’ny fihaonan’ny papa François amin’ny mpitondra fanjakana sy ny fiarahamonim-pirenena ary diplaomaty vahiny izany ao amin’ny “Ceremony building”. Handaha-teny ny filoham-pirenena ary hametraka hafatra ho an’ny mpitondra sy ny mpanao politika koa ny ray masina.
Handray tanana ny FFKM ny papa François
Hihazo ny eny amin’ny Karmela Ampasanimalo ny papa François avy eo hihaona amin’ireo relijiozy mitoka-monina ary hiara-hivavaka amin’izy ireo.
Ny tolakandro amin’ny 4 ora kosa, hihaona amin’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem) eny amin’ny katedraly Andohalo ny ray masina. Arahin’ny fifandraisan-tanana amin’ireo filoham-piangonana telo eo anivon’ny FFKM. Amin’ny 5 ora sy10 kosa ny papa, hitsidika ny lasapela misy ny fasan-dRasoamanarivo Victoire. Hitohy avy hatrany eny Soamandrakizay izany ka hihaonany amin’ireo tanora manerana ny Nosy. Hitondra hafatra ho azy ireo ny papa François. Hisy koa ny fanankinana ny tanora amin’i masina Maria. Haharitra ora iray izany rehetra izany ary hitohy amin’ny alim-bavaka sy ny fiaretan-tory.
Ho an’ny alahady kosa, lamesa eny Soamandrakizay, manomboka amin’ny 10 ora, miaraka amin’ny “Anjelisy”. Hitondra hafatra ho an’ny vahoaka malagasy ny tenany amin’io fotoana io. Amin’ny 3 ora sy 10mn ny fitsidihana ny Akamasoa eny Andralanitra ary hihaonany amin’ireo mpitantana sy ny fianakaviana ary tanora sy ankizy eny an-toerana.
Hampita hafatra ho an’ny mpiasa maneran-tany
Handray ireo mpitari-pivavahana silamo miisa telo avy eo ny papa François. Hivavaka ho an’ireo mpiasa mpamaky vato ary handefa hafatra ho an’ny mpiasa maneran-tany ny ray masina eny Mahatazana, amin’ny 4 ora. Eny Amparibe indray ny tenany amin’ny 5 ora sy 10 mn hihaona amin’ireo pretra sy ny relijiozy anaty fiainana voatokana, ny seminarista ao amin’ny Md Misely. Hihaona manokana amin’ireo zezoita ny papa avy eo.
Mifarana eo ny fitsidihan’ny ray masina eto amintsika. Manainga mihazo ny Nosy Maorisy ny alatsinainy 9 septambra maraina ny papa avy eo ary miverina eto Antananarivo indray amin’ny 8 ora alina. Handao tanteraka an’i Madagasikara kosa izy sy ny delegasiona tarihiny ny talata 10 septambra maraina.
Tsiahivina fa ho tapaka avokoa ny lalana mihazo ireo toerana rehetra voalaza ireo amin’izao fitsidihan’ny papa François eto amintsika izao.